Muxaadaro Contact us Quraan Bogga Gargaarka Wayeelada Dugsiyada Agoonta Forum Sheekooyinka E-mail	MAAN GUURSADEEN (SHEEKO GAABAN)
Haddii aan noqon lahaa gabadh Soomaaliyeed, maan guur-sadeen nin Soomaaliyeed. Haddii aan guur-sadana waxba uma dhaleen.
Bakhaylnimada gacmeed ee aad leedahay waxa kuu dheer bakhaylnimo caadifadeed. Ad adkaanta iyo eray qalafsanaanta waxaad u aragtaa ragganimo. Halka aad debecsanaanta iyo diir-naxa u aragtid dumarnimo. Waan dareensanahay inaad annaga noo dhididaysid, noo dhibtoonaysid, noona dhan qalmaysid, laakiin miyaad xanuunsan haddii aad eray-san igu tidhaa marka aad sii baxayso ina sii maca-salaamayso, marka aad soo noqotana i tidhaa; Waan kuu xiisay xabiibi. Miyaad dhiman haddii aad i sii dhunkato. Ma dhulkaa kula gu’i haddii aad tidhaa: Waan ku jecelahay, iyaga oo ubadkeenu ku maqlayaan. Miyaa lagu doorin, haddii aad iska dayso hooyadiin u yeedha, oo aad tidhaa: Inaabtiday Saytuun iigu yeedha? Mise waa lagu der-deri haddii aad dabacsanaan iyo dul-qaad ii muujiso. Haddaba miyaynaan iska wada joogin uun waadigii ila yaabanaaye? Ayay si garnaqsi ku jiro ii tidhi. Aaaaah, wax aan idhaa intaan garan waayay ayaan madaxa ruxay, anniga oo qajilaad iyo qiiro wax aan u kala garan waayay jidhkayga dhameeyeen. Hadalka ayay sii wadatay, waxaanay tidhi:
Gobi waa tii garawdee, waydiimahaa sare ka jawaabidooda waan u awood waayay, goor danbe ayaanse si qiiro iyo qushuuci ku jirto u idhi: Waan samayn karnaa macaan, waanan ka bedelayaa, waanan ku jecelahay. Maanta ka horna umaan qalmin inaan nin kuu ahaado. Laakiin, kun jeer baan kaa raali galinayaa gefafka aad iga tirsanayso ee wada macquulka. Intaasi haddii ay yaa allaah igaga soo baxday, waxaan arkay iyada oo illintu dhabanadeeda dul hoorayso oo hiq-dhabanaysa. Markaasan anna is hayn waayay oo aan naxariis iyo kal gacal la ilmeeyay. Waanu isku soo haadnay oo saacado ayaanu isku dul-hiqlaynay-nay, annaga oo duminayna dayrkii Barlin ee dhexdayada ku gudbanaa, dabiibaynana mashaacirtayadii dakharadu ku yaalleen. illintaydu waxay ku dhafantay illinteeda, dareenkayguna wuxuu ku tidcamay dareenkeeda. Hiin raag mooyee, hadal iyo hugun adaa sheegaya. Markii aanu is laab-xaadhanay habeenkaa barakaysan, waxaannu go’aansanay inaannu bog cusub u furno noloshayada danbe. Haddii aannu arrintaa si niyad samaana iskula qaadanay, inta ay iga kacday iyada oo aad balan baalis moodo ayay casho sukhaara oo aan caruurtuba malaha cunin ii keentay. Waligay casho ka dhadhan macaanayd. Waxa ka sii daran sidii ilmo yar ayay afka iigu gurtay, oo waxaan soo xasuustay hooyaday macaan. Cashada waanu ku dul haasawnay, ku dul kaftanay, kuna dul faraxnay. Haasaawuhu isaga oo meel dhexe noo maraya ayaan si kaftana u waydiiyay: Gacaliso Saytuuneey, nin Soomaaliyeed malaha maad guuuu…… Anniga oo aan hadalkaa dhamayn bay igu soo booday oo ay afka i qabatay , Iguna tidhi: Ha odhan hadalkaa mar danbe, ilaah baan kugu dhaariyee. Haye macaan inta aan idhi, ayaanu kobtii ka hinqanay annaga oo u sii jeedna qolkii hurdada, intii aannu sii soconay waanu isa sii daadahaynaynay, annaga oo is leh: Ha dhicin, ha dheeliyin. Sidii baanu qolka ku galnay, isla markiibana albaabka ayaan hoosta ka xidhay. Illaa haddana wuu ka xidhan yahay oo hawl gal millatari baa ka socda.
by:Axmed Ismaaciil Maxamuud (Axmed Deeq)